Scalping valopy EA - Best Forex ny EA | Expert Advisors | FX Robots
HomeFree Forex EAsScalping valopy EA
Scalping valopy EA dia rafitra fampiharana ara-toekarena efa mahazatra izay mamantatra ireo fidirana avo lenta amin'ny vidim-panafahana ny vidin'ny fanodinana envelopes. Miasa fotsiny amin'ny baiko mivezivezy, izay mamela anao handinika sy hifehezana ny fihetsiky ny EA.
The Expert Mpanolotsaina mampiasa ny Stop Loss toy izany foana ny tantara voaaro amin'ny avo fatiantoka. Ny tombony mety ho isaky ny varotra dia avo dia avo raha oharina amin'ny ny mety ho fatiantoka, toy ny manan-tsaina tanatin 'nijanona no nampiasaina mba handefa ny tombony nihazakazaka.
Scalping valopy EA is optimized for EURUSD M30, 0.00001. Tokony hampidirinao ao amin'ny tabilao ny EA ary avelao ny varotra maoderina hamela ny Expert Advisor miasa. Ny Expert Advisor dia hihazakazaka eo amin'ny paikady marobe. Amin'ny fikarakarana mety dia mety amin'ny fotoana rehetra ihany koa.
Scalping valopy EA - Settings
Magic BUY - Ny majika isa noho ny fahari ny EA toerana;
Magic Amidio - Majika isan'ny ho fohy ny EA ny toerana;
Aparitaho Max - Ambony indrindra niely, ny EA dia tsy varotra, raha ny amin'izao fotoana izao niely any ambony Spred_Max;
antsapaka fikirana - Raikitra masontsivana ny filokana;
___Loss Fiarovana settings___
BE hevitra 0 tsy miasa - Manova fijanonana very ny breakeven rehefa ny mahasoa ny ankehitriny mahatratra toerana nisy maro ny hevitra, raha 0 = manan-kilema;
TP hevitra 0 Env - Haka tombony amin'ny teboka, raha 0, dia handray soa dia nametraka araka ny masontsivana ny valopy famantarana;
SL hevitra 0 Env - Fijanonana very amin'ny teboka, raha 0, dia mitsahatra very dia nametraka araka ny masontsivana ny valopy famantarana;
___ Indiсator Fikirana ___
-potoana Env - Vanim-potoana ny valopy famantarana;
Deviati Env - Ny fahadisoan-dàlana ny valopy famantarana;
___Time Fikirana trade___
lany Minutes - Isan'ny minitra teo anoloan'ny expiry ny mbola miandry lamina;
Trading HoursStart - Varotra manomboka ora;
Trading HoursEnd - Ara-barotra ora farany;
Visible SL TP - Raha toa ka marina, dia mampiasa fijanonana hita maso ara-barotra amin'ny fahaverezana ary mandray tombony; raha diso, ajanony very ary maka tombony dia tsy hita maso ary mampandeha tamin'ny voalohany mifidy ny vaovao fisotroana.